XOG: Imaaraatka Carabta Oo Shaati Bir Ah U Xiray Cumar Cabdi Rashiid Iyo Mucaarka Oo Ku Rafanaya Muqdisho | Puntlandi.ca
Home Somaliya XOG: Imaaraatka Carabta Oo Shaati Bir Ah U Xiray Cumar Cabdi Rashiid Iyo Mucaarka Oo Ku Rafanaya Muqdisho
XOG: Imaaraatka Carabta Oo Shaati Bir Ah U Xiray Cumar Cabdi Rashiid Iyo Mucaarka Oo Ku Rafanaya Muqdisho
Sanadka 2018-ka wuxuu ku mar kale ku bilowday Xiisad Siyaasadeed oo u dhaxaysa Dawlada Federaalka Soomaaliya iyo Siyaasiyiinta Mucaaradka ah, xilli doorka Siyaasadeed ee dawlaha Khaliijku uu si xoog leh u muuqanayo.
Waxaa wadanka Isutaga Imaaraatka Carabta xarun ka dhigtay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdi Rashiid Cali Sharmaarke iyo Xildhibaano ka tirsan Aqalka hoose, kuwaas oo dhaliilsan hannaanka ay u shaqayso Xukuumadda Soomaaliya.
Cumar Cabdi Rashiid ayaa u muuqanaya inuu gashtay shaati bir ah, waxaana uu noqday Siyaasi aad loo hadal hayo bilihii ugu dambeeyay, waxaana uu bilaabay inuu bixiyo Waraysiyo uu ku dhaliilayo dawlada Soomaaliya.
Sharmaarke wuxuu sheegay inuu dawlada uu horay u taageeray, balse taas macnaheedu aysan ahayn inuu waligiis daba joogayo, isagoo taageero uu siiyo mar kale ku tilmaaamay inay ka dhigan tahay inuu si indho la’aan ah u dabagalo.
Siyaasiga Mucaaradka u qaabilsan isku xirka dibada ayaa loo arkaa Cumar Cabdi Rashiid, waxaana jira sawiro joogto ah oo uu farshaxamiiste Amin Arts ka sameeyo.
Siyaasiyiinta Mucaaradka ah, ayaa hadda aad u xoogaystay, waxay dhexgaleen bulshada, waxay kaalin muhiima ka qaateen Warbaahinta, halka ay aragtidooda si joogto ah uso bandhigaan.
Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur ayaa noqday Siyaasiga gudaha u qaabilsan Mucaaradka, waxaana Miisaankiisa muujinaya Weerarkii ay dhowana dawlada Soomaaliya ku qaaday gurigiisa, kaasi oo xaaladiisa ay illaa iyo iminka taagan tahay.
Mucaaradka ayaa doonaya in meesha laga saaro Xukuumadda iyo Fahad Yaasiin, waxaana Farmaajo uu noqonayaa qofka saddexaad ee ay dhaliilsan yihiin.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaan miisaan siin Mucaaradka dawladiisa, waxaana u muuqanaya inuu ka guulaysan doono waqto dhow.
Mucaaradka ayaa Mooshinkooda si hoose u wata, waxaa Aqalka Sare hawsha ka wada Abshir Bukhaari oo ka mid ah guddoonka Aqalka Sare ee Soomaaliya.
Inkasta oo 2018-ka uu ku bilowday dagaalka Siyaasadeed mid aad u adag, hadana waxaa muuqanaya inuu xoogayan doono waqtiyada soo socda.
Halka Mucaaradku ay ku dagaalami karaan waa Baarlamaanka, laakiin ma leh awood kale oo ay dawlada kaga hor iman karaan.
Si kastaba ha ahatem dadka Soomaaliyeed ayaa indhaha ku haya xaalada Siyaasadeed ee Muqdisho, taasi oo aan la aqoon natiijadeedu waxay noqonayso.